Sidee Ayuu Japan Ku Gaadhay Horumarka? Axmed Adan Cali (Haybe) | Dhaymoole News
Sidee Ayuu Japan Ku Gaadhay Horumarka? Axmed Adan Cali (Haybe)
March 10, 2019 - Written by wariye999
Dalka Japan caruurtooda ayaa dirays isku mid ah dugsiyda ku wada dhigta iyadoo taasi looga jeedo in aan midkoodna kan kale ugu faanin dhar qurux badan. Waxaana caruurta lagu baraa maado lagu magacaabo “Dariiqa akhlaaqda” mudada ay ku jiraan fasalada koowaad ilaa kan sadexaad ee dugsiyada hoose lagama qaado haba yaraatee imtixaan waxaana la sheegay in mudadaasi la barayo habkii ay u noolaan lahaayeen iyo sidii ay horumar u samayn lahaayeen oo keliya.
Ma jirto wax lacag ah oo caruurta laga qaado inta ay ku jiraan fasalada koowaad ilaa dugsiga dhexe, maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin inay tahay dhisidda ilmaha, iyo in la ogaado waxa ay maskaxdiisu ku fiican tahay. Inkasta oo uu Japan ka mid yahay dalalka ugu qanisan dunida haddana Japan ma laha jaariyado reerka u sheqeeya xataa guryaha dadka ladan aabaha iyo hooyada ayaa masuul ka ah guriga iyo caruurta si ay u bartaan inay shaqaystaan.
Caruurta dugsiyada Japan maalin kasta rubuc saac ayay xaadhaan dugsiga iyaga iyo macalimiintuba iyadoo looga jeedo inuu soo baxo jiil cusub oo Japan ah oo jecel nadaafadda. Dhamaan caruurta yaryari waxay sitaan burshka cadayga si marka ay wax cunaan ugu cadaydaan waana tarbiyad si caafimaadkooda loo ilaaliyo.
Waxa jira tababare caruurta siiya khudbado caafimaadka ah sida in aanay ku isticmaalin mobilka tareenmada, huteelada iyo meelaha waxabarshada.
Dadka Japan ayaa lagu qiyaasaa kuwa ugu ilaalinta badan wakhtiga dunida waxaana la sheegay in Tareenku sanadka oo dhan uu ka habsaamo goobtiisa qiyaas 7 ilbidhiqsi. Waxayna ogaadeen qiimaha wakhtiga iyagoo uga faa’idaystay dhinaca noloshooda aduunka, taasi oo horumar u keentay.